I-Western Digital ngokungalindelekanga ihlaziya ii-hard drive zayo ngeThunderbolt 3 kunye nezinye izinto ezimangazayo | Ndisuka mac
I-Western Digital ngokungalindelekanga ihlaziya ii-hard drive zayo ngeThunderbolt 3 kunye nezinye izinto ezimangazayo
Asazi ukuba izixhobo zika-Apple kunye nabathengisi bepheripri babanjiwe gwenxa. Kodwa ibikukubhengeza yinkampani ukuzibophelela kwayo kwizixhobo ezitsha kwicandelo lobungcali loluhlu kwaye abathengisi baye baphambana ngokuzisa iindaba okanye iimveliso kuphuhliso ezingazange zilindelwe kwiimeko ezilungileyo kude kube ngo-2018.
Kwiintsuku ezidlulileyo besiphawule ngamakhadi amatsha eNvidia, aya kuthi enzelwe iMac Pro kunye neMac Pro, zombini zangoku (ezinokubakho nokwandiswa) kunye nekamva. Kutshanje sixelele indlela i-Intel inyathela ngayo kwi-accelerator yokukhutshwa kweetshipsi ezintsha.
Ngoku lithuba lokuqhuba kanzima. Kule meko, uphawu lwedijithali eNtshona ligqiba ukubonisa into emele uhlaziyo olunzulu lwezixhobo zalo. Kwiiveki ezimbalwa ukuqhuba kwangaphandle kunxibelelwano olupheleleyo nge-USB-C, kunye nokusebenza kwesantya esisetyenzisiweyo, kuluhlu lonke. Ngoku kukujika kweThunderbolt 3 kulo lonke uluhlu lweemveliso, ezinikwe igama ngolu hlobo lulandelayo:
G-Drayivu ngeNdudumo 3
G-Raid ngeNdudumo 3
Ezi zinto zintsha ziya kuba kukuthanda iingcali zokuyila, zombini ukubamba nokudlulisa izinto ezifunyenwe kwizisombululo eziphezulu.
Ukuba ucinga ngokutshintsha okanye ukwandisa ugcino lwakho lweMac, nantsi eminye imisebenzi ye- G-Drayivu ngeNdudumo 3: Inamanqaku amabini e-TB3, izibuko le-USB-C, kunye nenkxaso ye-USB 3.1. Ngoku sinokunxibelelana nezixhobo ezintlanu kwityathanga. Sinophawu lweHGST I-Ultrastar kwi-7200RPM, ekwazi ukufikelela kwinqanaba lokudlulisa ukuya kuthi ga kwi-245 Mb / s. Okokugqibela, inkxaso yeTime Machine ifakiwe kwiikhompyuter zangaphambili.
Ifumaneka kumandla amane okugcina: 4TB ye $ 399.95, 6TB ye $ 499.95, 8TB ye $ 599.95, kunye ne-10TB ye- € 699.95. Ngesi sihlandlo, sineenguqulelo ze-12 ze-TB eziza kukhutshwa ngaxa lithile "kwikota elandelayo" nge- € 799.95
Ukukhetha kwe G-Raid ngeNdudumo 3, ibandakanya amazibuko amabini e-TB3, izibuko le-USB-C, kunye nezibuko le-HDMI ngaphandle kwebhokisi. Le mveliso ikuvumela ukuba ukhuphe ividiyo kwi-60 fps kwi-4K kunye nomxholo we-HDR. Ibandakanya i-7.200 rpm iidrive hard kwaye inokuthambisa ikhonkco ukuya kuthi ga kwizixhobo ezongezelelweyo ezintlanu, ngesantya sokudlulisa ukufikelela kwi-500 Mb / s.
Ngokwamandla, bayanyuka: i-8 TB yokuqala ye- $ 749.95. Inketho ye-12 ye-TB ixabisa i- € 849.95, i-16 TB yi- $ 1,099.95, i-20 ye-TB ngamaxabiso ayi- $ 1,549.95, kwaye umphezulu woluhlu yi-24 TB kwi- $ 1,999.95. Le nguqulo yamva nje ayifumaneki okwangoku, kodwa ilindelwe kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Western Digital ngokungalindelekanga ihlaziya ii-hard drive zayo ngeThunderbolt 3 kunye nezinye izinto ezimangazayo
Fumana ngaphezulu kweetemplate ezingama-300 ze-imeyile zakho ezingaphantsi kweyure enye
IFoto Montage, isimahla ixesha elilinganiselweyo